पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ भाद्र २० गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर ५ तारिख) शनिबार : ॐ शन शश्चिराय नम : शनि महादेवकी जय - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज धर्म/संस्कृति पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ भाद्र २० गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर ५...
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ भाद्र २० गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर ५ तारिख) शनिबार : ॐ शन शश्चिराय नम : शनि महादेवकी जय
२० भाद्र २०७७, शनिबार ०८:३५
कोभिड–१९ महामारी बन्दाबन्दी खुल्ला भएपछि अझ भयावह हुँदै गईरहेको अवस्थालाई बुझेर सबैजना सामाजिक दुरी कायम गर्दै घरमै बसौं । अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर नजाऔं । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट २ सय ७१ जनाको निधन भईसकेको अवस्था छ भने संक्रमितको संख्या ४४ हजार २ सय ३६ जना पुगिसकेको छ । करिब करिब देशैभर कोरोना भाइरस फैलिसकेको छ । यद्यपि २५ हजार ५ सय ६१ जना सफल उपचारपछि घर फर्केका छन् ।
मेष – ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य बढ्ला । खेलकुद र भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभावमा वृद्धि होला । आफूतिर अरुलाई तान्ने क्षमता बढ्नेछ । सुख–सुविधासित सम्बन्धित काम बन्नुको साथै वार्तामा पनि सफलता मिल्नेछ । धरको सुखशान्ति बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । मान–पुरस्कार पाइनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रमा नयाँ सफलता प्राप्त होला । मनोकूलको काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्नेछ । रसरागप्रति आकर्षण बढ्नेछ ।
कन्या – वार्तामा सफलता मिल्नेछ । धन सम्पत्ति बढ्ला । शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । यात्रा हुनेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । सुख शांति बढ्ला । ख्याति फैलिनेछ । बौद्धि र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । प्रेम पात्रको माया ममता मिल्नेछ । इष्टमित्र सुख सन्तति बढ्नेछन् । मिठो भोजन मिल्नेछ ।
वृश्चिक – विवादप्रति सचेत भई अरुको भरमा नपरी काम गर्नु हितकर रहला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । गीतसंगीतमा आकर्षण बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । यात्रापरक काम बन्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । आशा उत्साह बढ्ला । दूरदेशबाट शुभ समाचार सुन्न हुनेछ । इष्टमित्र सन्तान सुख बढ्ला ।
धनु – आरोग्यता बढ्ला । शत्रुलाई जित्ने क्षमता बढ्नेछ । आर्थिक उन्नति हुनेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । मान पदवी मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । सुख सम्पति बढ्नेछ ।
मीन – स्वास्थ्यप्रति सजग रहनुपर्नेछ । खर्च बढ्नेछ । यात्रापरक काममा सफलता मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने क्षमता बनिरहला । मिठो भोजन मिल्नेछ । रोकिएको काम बन्ला । मनोकुलको काम बनेर मन प्रशन्न भैजानेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । सुखको वस्तुमा खर्च बढ्ला । आफन्तको सहयोग प्राप्त होला । जीवनसाथीको साथ प्राप्त होला ।
अघिको समचार अर्थ तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. खतिवडाले दिए राजिनामा